Nanendry seza vaovao ny Fahefam-pirenena misahana ny fizahan-tany Kiribati: ho an'ny mpandeha i Kiribati!
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanendry seza vaovao ny Fahefam-pirenena misahana ny fizahan-tany Kiribati: ho an'ny mpandeha i Kiribati!
Danial Rochford dia notendrena ho Filohan'ny Lehiben'ny fizahan-tany vaovao any Kiribati
Hoy izy tamin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Linkedin :: "Voninahitra lehibe izany ary manantena ny fanamby hitarika ny Birao aho amin'izao fotoana manandanja izao. Na i Kiribati aza no firenena fahenina mitsidika indrindra eto amin'izao tontolo izao, dia manana tontolon'ny fahafaha-manao izany. Hope hahita anao tsy ho ela eto! ”
Danial Rochford amin'izao fotoana izao dia mpitantana jeneralin'ny varotra, paikady ary asa ho an'ny Air Kiribati Ltd, mpitatitra nasionalin'ny Repoblikan'i Kiribati any Pasifika afovoany manidina mankany amin'ny Nosy Solomon, Aostralia ary Tuvalu ary any an-toerana mankany amin'ny seranana 19 ao Kiribati.
Nandritra ny asany dia nandeha tamin'ny làlana maro samihafa sy mahomby izy tamin'ny naha mpitantana ny fanovana eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny fiaraha-monina, fizahan-tany ary seranam-piaramanidina .. Danial dia CEO taloha an'ny Whitsundays Marketing and Development Ltd ary koa Gladstone Area Promotion and Development Ltd koa amin'ny maha talen'ny fizahantany ny iray amin'ireo toerana manintona fizahan-tany any Aostralia, ny Port Arthur Historic Site. Izy koa dia nitana fikambanana fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy isan-karazany, ao anatin'izany ny talen'ny Economic Developemnt ho an'ny Filan-kevitry ny Tanànan'ny Roma, Mpanolotsaina amin'ny faritra ho an'ny Central Highlands Development Corporation ary ny Birao Fampandrosoana ny faritra Colooloa ary koa ny CEO an'ny Rural Alive sy Well any Tasmania.
Mpanolotsaina ny Hon. Desley Boyle sy Hon. Margaret Keech ao amin'ny Governemanta Queensland ary koa ho an'ny Hon. Dick Adams sy ny senatera John Coates ao amin'ny Governemanta federaly aostralianina. Nifampiresaka tamin'i Ausaid, New Zealand MFAT ary ONG hafa izy.
Kiribati dia natao ho an'ny mpandeha - ireo izay maniry fatratra ny hikaroka sy hahita ireo olona tia traikefa an-dalambe eny amin'ny lalan'ny fizahan-tany mankany amin'ny toerana izay vitsy no taloha, sy ireo olona te-hahatakatra firenena - tsy mahita izany fotsiny. Kiribati dia hanao fanamby amin'ny fahitanao ny fomba tokony hisy ny fiainana ary hasehoko anao ny fomba fiainana tsy dia manahirana kokoa eo amin'ny toerana voalohany ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina.
Any amin'ny pasifika ekoatera, any atsinanan'i Kiribati dia manolotra mpanjono kilasy eran-tany (na lalao na jono taolana) avy Nosy Kiritimati. Any andrefana dia ny vondrona nosy Gilbert, izay manome traikefa ara-kolontsaina mahatalanjona sy tsy manam-paharoa. Ny firenena renivohitr'i Tarawa manana toerana sy zava-kanto manan-tantara izay iray amin'ireo ady nahakivy indrindra tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, ny ady tao Tarawa.
Ny tranokalan'ny fizahan-tany dia milaza fa: Raha mitsidika ny asanao ianao, dia mamporisika anao izahay zahao Kiribati hiaina ireo fahafinaretana ireo - ny Tarawa atsimo dia tsy tokony ho ny Atoll tokana vangianao rehefa 33 no safidinao, na ny Tarawa Avaratra eo akaiky eo aza dia manome fomba fijery tena hafa tokoa!
Sidina Edmonton mankany Hamilton: fahombiazana vaovao nataon'i Swoop
Ny mpitarika ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy dia any Nepal